Kenya oo soo bandhigtay magacyada iyo sawirada rag ay ku tilmaantay halis – Hornafrik Media Network
Kenya oo soo bandhigtay magacyada iyo sawirada rag ay ku tilmaantay halis
By Liibaan Nuur	 On Jan 2, 2020
Dowladda Kenya ayaa shaacisay magacyada iyo sawirrada seddax xubnood oo ay shegtay inay halis ku yihiin ammaanka dalkeeda, kuwaas oo ka tirsan Al-Shabaab.
Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in baaritaan dheer iyo xog sirdoon oo la helay kadib la ogaaday magacyada shakhsiyaadkan iyo sidoo kalena la helay sawirradooda.
Seddaxda nin ee dowladda Kenya ay soo bandhigtay xogtooda ayaa waxay kala yihiin Kyalo Masai, Juma Waziri iyo Salim Mohamed, waxayna dowladda Kenya ku tilmaamtay inay yihiin dagaalyahano halis badan ku ah ammaanka dalkeeda.
Booliska Kenya ayaa shacabka ka codsaday inay si deg deg ah ula soo wadaagaan macluumaad kasta oo la xiriira ragaas si ay ugu suurta gasho in lasoo qabto ama la dilo.
Wargeyska Daily Nation ayaa qoray in seddaxdas dagaalyahan ee ka tirsan Al-Shabaab fikradda xagjirnimada ah looga dhaadhaciyey magaalooyinka Mombasa iyo deegaano ka tirsan ismaamulka Kwale ee dalka Kenya.
Warbixinta ay Booliska Kenya ka soo saareen raggan ayaa lagu sheegay inay xiriir dhow la leeyihiin Aboud Rogo iyo Abubakar Sharif oo ah horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab.
Sirdoonka Kenya ayaa horey u sheegay inay duqeyn ku dileen Rogo sanadkii 2012-kii, halka Axmed uu weli ku jiro dadka ay dowladda Kenya doondoneyso inay ka aargudato.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey digniino ku aadan weerarro ay Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya waxayna taas keentay in heegan buuxa la geliyo laamaha ammaanka si looga hortago weerarrada ay Al-Shabaab u qorsheeyeen goobo ku yaalla gudaha dalka Kenya.